Mashoma adhesti anoshanda sei
Kana iwe usingade kubvumidzwa kana iwe uchishandisa yakajairwa bras, Yako mapfekero anogumira, tambo dzinobuda kunze kubva kumusoro uye kunyangwe kana dzakanyatsosungwa kumashure, unogara uchiziva nezvevari kuwa kana kutama kubva pane imwe nzvimbo. Zvakare, iyo bhendi yakasimba kana underwire inogona kukusiya uine yakadzika rashes. Kunyangwe zvigoko zvekuseri kumashure hazvina kugadzikana.
Zvimwe Kugara Wakajairwa NeBotwo Unonetsa
Kukura kwakashata bra kana kunyangwe chaipo pane icho chinhu chinogona kukonzera kurwadziwa kwakanyanya pazamu.
Vakadzi vazhinji kunyanya avo vane mazamu mahombe vanogunun'una nekurwadziwa shure. Izvi dzimwe nguva hazvisi nekuda kwehuremu hwepanyama hwekugara kwako asi nekuda kwe mitambo inoruma mumapfudzi ako nguva zhinji.
Bhurawu yakagadzirirwa kunyatsochengeta mazamu ako uye nokudaro kudiwa kwekuve nemasimba emazamu anoenda. Asi nekuda kwekuti mhasuru dzako dzichijaira izvo, ivo nemasikirwo vanorasikirwa nesimba rekuchengeta vakadzi vako vakasimba.
Imwezve ngozi kune hutano kubva bras ndeye lymph node blocking. Bhata rakasimba haritenderi mazamu ako kubva mukudonhedza lymphatic fluid uye inogona kutungamira kuchirwere chechipfuva.
Chii chinonzi Adhesive Bra?
Tisati takuudza zvese nezvekuti ungapfeka sei stick pa-bra, ngatitangei kukutaurira zvavari chaizvo. Sticky bras, inonamira pamabhureki, kana mabhureki anonamatira sezvavanowanzo kudanwa ndidzo dzinonyatsotsanangurwa seasina tambo, mabhureki asina kumashure anoomerera kuseri kwemazamu achishandisa giredhi rekunamatira rekurapa. Bras rudzi rwemukati mekupfeka kune vakadzi izvo zvinorehwa kupa rubatsiro kumazamu uye kudzivirira matambudziko akadai sagging uye kumashure kurwadziwa izvo zvakanyanyisa uremu zvinogona kukonzera. Ivo zvakare vanogadzira mufananidzo wemunhukadzi uye vanosimudza ivo vakadzi vaviri, vachipa muviri wakakomberedzwa. Nekudaro, mazhinji bras anokwenenzvera kubva kune anonamira zvipfeko uye ndiyo hombe kwete-kwete! Ipapo ndipo panonamira bras kununura.
Ivo vanowanzogadzirwa nesilicone, polyurethane, kana zvimwe zvinhu zvakafanana. Izvo zvinonyanya kukodzera zvipfeko izvo zvisina musana, isina tambo, kubva papfudzi, kana chipfeko chiri kuratidza chakakomberedza nzvimbo yakatsemuka. Inoitirwa kupa kutsigirwa kwakafanana kumazamu emukadzi sechaunogara uchiwedzerwa, kukwidziridzwa kuwedzeredzwa, uye kutaridzika kwakasimudzwa pasina kunyatso kuoneka. Dhigirii yeizvi zvese zviri pachena inosiyana asi inoita kuti basa riitwe!
Kubatsira Kwekunamatira Bra:
Adhesive bras yakapfava uye inochinja-chinja nekuti unogona kungoanamatira pairi, izvo zvinoita kuti vawedzere kupfeka. Iko zvakare hakuna underwires inopinda mukati mako underbust.
Mazhinji vakadzi vanogunun'una nekurwadziwa kwemusana.Asi neine adhesive bra, izvi hazvisi izvo kuti iwe unogona kunakidzwa nerutsigiro pasina kurwadziwa.
Nema brashe anonamira ako echisumbu emazamu emapuru achiri kufanira kuita basa rawo, nokudaro kudzivirira kugegedzera.
A solid bra haibvumidze mazamu ako kuti adonhedze lymphatic fluid.Naizvozvo, ine adhesive bra, izvi hazvisizvo sezvo ivo vachibvumira kuwedzera kwakawanda.
Mushure mekupfeka zvakanamatira bras musana nemutsipa mukurwadziwa unogona kuzorora.
Maitiro ekushambidza nekuchenesa tsvina yako
Doro rakasununguka rinodzora
Ita shuwa kuti maoko ako ose akacheneswa uye mafuta akasununguka
Bvisa bhururu, pwanya pepurasitiki inodzivirira kubva mukati kusvika kunze.
Chekutanga nyorovesa mvura nemvura yakachena.Tora zvishoma dhergant mukati yekunamatira bra.Massage geza zvinyoronyoro nzvimbo yekapu.Clean in Circuit motion using using tip tip .
Rega riome iro nechisikigo / rakaoma remhepo. (Regedza kutsauka kwezuva)
Shambidza uye uomese ganda rako, bvisa mafuta emuviri uye zvasara kubva paganda.
Isa rimwe divi panguva
Batanidza iyo clasp yepamberi.
Chengetedza kubatabata neruoko rweviri pane pane makapu e-bra chengetedza zvakasimba kwehafu yepiri.
Zvinogoneka Allergies Uye Dzimwe Hutano Njodzi:
Kunyangwe mushure meizvi zvese iwe ungangofunga kuti chikomborera chii pa-bra uye kuti chakaitwa sei hupenyu huve nyore, hatigone kupedzisa chinyorwa ichi pasina kukupa kuzarurirwa kwakazara kwehutano hwengozi dzinogona kuitika nekuda kwavo.
Kudziya kweganda: Dzimwe nguva makapu esilicone anogadzirwa nezvinhu zvakaderera-zvemhando uye anogona kutungamira pakutsvuka nekutsamwa kweganda. Kunyangwe kuomerera kunogona kukonzera kukanganiswa uye kuita pane muviri wako.
Dambudziko rekufema zvishoma: Silicone ine yakadzika mweya wekushomeka uye inogona kukonzeresa matambudziko kunyanya kana ukaipfeka kazhinji.
Saka mashandisiro edu anoshanda sei:
Yedu inonamatira bra inovandudzwa kupfuura tsika dzekunamatira:
Wedu Adhesive Bra Yakapfuura Certification yezvakatipirwa.Usazvinetsa nezveganda rako, iyo inonamatira kumusoro kumusoro yakagadzirwa kubva kune yeganda-inoshamwaridzana nesilicone inogona kukupa iwe chiitiko chisati chamboitika pasina kukonzera marwadzo.Iye yakagadzirwa neyechiremba giredhi yeguru-hypoallergenic, vanogona kuchengeteka, vakagwinya uye kupfeka zvakanaka kunyange paganda rinonyanya kutaridzika.
INSTANT BREAST LIFT, pakarepo simudza inenge 3cm, isu tinopa 3 saizi kuti iwe usarudze, vakadzi vakagadziridzwa vanosundira kumusoro isina tambo isingaoneki bra yakakura uye yakagadzikana zvakakwana kuti ifukidze chipfuva chako.Iyo yekumhanyisa inosimudzira kumusoro mabhureki inonamatira uye inogona kugara mukati nzvimbo zvakanaka kuti udzivirire zvizere zamu rako kubva pakuvira uye rirambe rakatsigirwa uye perky rine chimiro chakanaka. Nekuda kwetenderedzwa uye moyo wakaita kunge wakafema magaro dhizaini, iyo bra inogona kufema.
Kuzvishongedza, 100% yakachengeteka & ganda-inoshamwaridzika silicone, yakapfava uye yakagadzikana kupfeka, yakakodzera kune ganda rinonzwa. Yakasimba inonamira silicone inoenderana neyemucherechedzo wako uchigara panzvimbo, kufukidza iyo mazamu ese emawere nipple nzvimbo zvakatsiga. Nzira inosimuka yekuenda-shoma-inogadzika kwenguva dzinoverengeka. Mushure mega kushandiswa, geza nemvura inodziya pazasi 30℃, mvura nesipo nyoro saka mweya wakaoma chose.
The adhesive nipplecovers inosimudza chisingaonekwe chine simba chakasimba chinotsiga silicone kuchengetedza munzvimbo kuti iumbike kumitsipa yechipfuva chako, uye chengetedza mazamu akatsigirwa uye ari erky. Mhedzisiro dzakakwana dzePamusoro, Blouse Shirts, Shiri, Yasina kudzoka, Yakadzika-V, Kupfeka Kwemuchato, uye Zvipfeko.
Dhizaini yakasarudzika uye giredhi rekurapa gel-hypoallergenic kungofanana neganda repiri, rakanyatsogadzikana uye rakabatwa zuva rose.
Nguva yekutumira: Mar-31-2020